လူသတ်တရားခံ ကြေးမုံကမိ ရဲကမမိ စက်တင်ဘာ၂၂ရက်နေ့၌ ဖြစ်ပွား ခဲ့သော မော်လမြိုင် ကျွန်းမြို့နယ်မရဲအုန်းပင်စု ကျေးရွာလူ သတ်မှု တွင် ကြေးမုံ သ တင်း စာ၌ ဖမ်းဆီးအရေးယူ ထားဟု ပါရှိသော်
At 10/22/2012 09:36:00 PM No comments:
မြောက်ဦးမြို့နယ် ပရိန်ကျေးရွာတွင်ဘင်္ဂလီများမှ သေနပ်များဖြင့် ပစ်ခတ် မှုဖြင့် ရခိုင် ၄ ယောက်နှင့် စစ်တပ်မှ ၂ ယောက်ကျဆုံးဟု ဖုန်း သ တင်း အရ သိရှိရပါသည်။ စစ်တပ်မှ ဗိုလ်အဆင့်ရှိ တယောက်ပါဝင်ဟုလည်း သိရပါသည်။
At 10/22/2012 09:14:00 PM 1 comment:
At 10/22/2012 09:11:00 PM No comments:
At 10/22/2012 08:08:00 PM No comments:
မြန်မာ-ဘင်္ဂလာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကုန်များ လုယက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနေ
ရခိုင်ပြည်အတွင်း ဇွန်(၈)ရက်နေ့က စတင်အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရ မှုနောက်ပိုင်း မြန်မာ-ဘင်္ဂလာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စီးပွားရေးမှ ကုန် များမှာ အကြမ်းဖက်သူများထံ လုယူသိုလှောင်မှု ခံနေရမှုကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ရိက္ခာပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိ ရသည်။
At 10/22/2012 07:58:00 PM No comments:
မြောက်ဦးမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွါးနေသော ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုတွင်ဘင်္ဂါလီလူမျိုး များ သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အလောင်း သုံးလောင်းမှာ မြောက်ဦးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ရောက် ရှိနေပြီဖြစ်ေ ကြာင်း မြောက်ဦး မြို့ နယ်ဒေသခံ အမျိုးသားတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
At 10/22/2012 07:55:00 PM No comments:
(20 October 2012 ရက်စွဲပါ VOA News မှ Danielle Bernstein ရေးသားသော Military outreach seen as new step in engaging Burma ကိုဘာသာပြန်ပါသည်)
အရှေ့တောင်အာရှတွင် ပြုလုပ်မည့် အကြီးဆုံး နိုင်ငံစုံစစ်ရေး လေ့ကျင့်ပွဲသို့ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအား လေ့လာရန် ဖိတ်ကြားမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဖိတ်ကြားမှုသည် မြန်မာအစိုးရ၏ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် နိုင်ငံတကာ၏ တုန့်ပြန်မှု များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
At 10/22/2012 07:40:00 PM No comments:
ပါကစ္စတန်တွင် သတင်းမီဒီယာများကို တာလီဘန်များ ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိ
အစ္စလမ္မာဘတ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၉
ပါကစ္စတန် အမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ မိန်းမငယ်အား တာလီဘန်များ ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကို ဝေဖန်ရေးသားခဲ့သော သတင်းမီဒီယာများအား လက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တာလီဘန်များက ခြိမ်းခြောက်ပြောကြားလိုက်သည်။
At 10/22/2012 07:08:00 PM No comments:
ကလေးမြို့နယ်အတွင်း ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီများ အဆက်မပြတ် ၀င်ရောက် လာခြင်းကြောင့် ဒေသခံများ စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ဟု သိရှိရပါသည်။''ကလေးမြို့နယ်အတွင်းကို စက်တင်ဘာလကနေစပြီး အခုအချိန်အထိ ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ မိတာ လေးကြိမ် ရှိပါပြီ
At 10/22/2012 05:52:00 PM No comments:
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ လူမျိုးခြားများ ခိုးဝင်လာခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အတွက်နယ်စပ်ဒေသများတွင် Satellite ဂြိုလ်တုများ အသုံးပြုကာ စောင့် ကြည့် သွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
At 10/22/2012 04:44:00 PM No comments:
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မြောက်ဦးမြို့ နယ်၌ ဘင်္ဂါလီများလက်ချက် ဖြင့်
အနည်းဆုံး လူတစ်ဦး သေဆုံး သွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
At 10/22/2012 04:02:00 PM No comments:
ပန်းမြောင်း ကျေးရွာအနီး သရက်အုပ် ဘင်္ဂလီကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၂၀၀ ခန့်  (တစ်ရွာလုံး) မီးလောင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ထိုရွာမှဘင်္ဂလီများ သည် မြောက်ဦး မြို့နယ် ပရိန်ကျေးရွာ (ချောင်းတစ်ဘက်ကမ်း) သို့ ထွက်သွားကြ ပြီးယင်းတွင်ပရိန်ရခိုင်ကျေးရွာအားမီးရှို့ရန် ကြိုးစားလျက် ရှိကြောင်းသိရှိ ရပါသည်။
At 10/22/2012 03:51:00 PM No comments:
ပုဂံရှေးဟောင်းဇုန်အတွင်းဟိုတယ်များ၊၀န်ထမ်းအိမ်ရာများ တည်ဆောက် ထား မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ယနေ့အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်တွင် မြို့ခံ ၅၀၀ ခန့်စီ တန်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
At 10/22/2012 02:51:00 PM No comments:
လစ်ဗျားဆန္ဒပြသူများက ပုဂ္ဂလိက အယ်လ်ဟာရာ ရုပ်မြင်သံကြားဌာနကို စီးနင်းတိုက်ခိုက်
အာဏာရှင်ဟောင်း မူအမ်မာ ကဒါဖီ၏ သားဖြစ်သူ အဖမ်းခံရသော သတင်းကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကျေမနပ် ဖြစ်နေသည်ဟု ယူဆရသော ဆန္ဒပြသူများသည် အယ်လ်ဟာရာ ရုပ်မြင်သံကြား ဌာနသို့ အင်အားသုံး ဝင်ရောက်ကာ ဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
At 10/22/2012 02:10:00 PM No comments:
အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် Cobra Gold စစ်ဆင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို လေ့လာသူအဖြစ် ဖိတ်ကြားလာပါက
At 10/22/2012 01:57:00 PM No comments:
At 10/22/2012 01:46:00 PM No comments:
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ Miss International 2012 ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုယှဉ်ပြိုင်တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာက People Choice Award ဆုနဲ့ Miss Internet ဆု ၂ ဆုကို ဆွတ်ခူးသွားပါတယ်။
At 10/22/2012 01:33:00 PM 1 comment:
ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ် ၊ ပန်းမြောင်း သရက်အုပ်ကျေးရွာ တွင် အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့(ယနေ့)နံနက် ၇နာရီမှစ တင် ကာ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နေအိမ် ၂၀၀ ခန့် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း
At 10/22/2012 01:27:00 PM No comments:
ဘင်္ဂလီများအချင်းချင်း အချင်းများကြရာမှ လူထုအုံကြွကာ မီးလောင်မှုထိဖြစ်ပွား
အောက်တိုဘာလ (၂၁)ရက်နေ့ ညနေ ၉နာရီခန့်တွင် မင်းပြားမြို့နယ် ပိုက်သည်ရွာရှိ ဘင်္ဂလီများအချင်းချင်း အချင်းများကြရာမှ လူထု အုံကြွမှုဖြစ်လာကာ မီးလောင်မှုများအထိ ဖြစ်ပွားခဲ့ရကြောင်း သိရှိရ သည်။
At 10/22/2012 12:00:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ဒေသအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူများသည် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှ စကာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်း သားများ အဖွဲ့များနှင့် ပေါင်းစည်းကာ ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖားကန်
At 10/22/2012 11:50:00 AM No comments:
ဦးခင်ညွန့်တယောက် လူမြင်ကွင်းကို တဖြည်းဖြည်း ပြန်ထွက်လာပါပြီ အခု ဆို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဟောင်း အရှင်ဝိရသူနဲ့ တွေ့နေတယ်လို့ သိရှိ ရပါတယ်။
At 10/22/2012 11:27:00 AM No comments:
ကုမ္ပဏီတွင်း အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် ဖြန့်ဝေပြသခဲ့သည့်ဗီဒီယိုေ ပါက်ကြားသွားပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ သတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
At 10/22/2012 10:58:00 AM No comments:
At 10/22/2012 10:51:00 AM No comments:
၂၁ . ၁၀. ၂၀၁၂ သတင်းလက်ရှိ အရေးကြီး မင်းပြားမြို့သတင်း
၂၁.၁၀.၂၀၁၂ ရက် ညဉ့် ၁၁း၀၀ နာရီပတ်ဝန်ကျင်တွင် မင်းပြားမြို့ အဝေးပြေး ကား ဂိတ်နားအနီ ပိုက်သည်ရွာတွင် ဘင်္ဂလီကုလား မိမိရွာကို မီးရှုံးပြီး ထွက်ပြေးလျှက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ မီးသည် အချိန်ပြင်းစွာ လောင်းလျှက်ရှိပြီး မင်းပြားမြို့ တခုလုံးမှာ စိုးရိမ်
At 10/22/2012 10:46:00 AM No comments:
သမ္မတ အိမ်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဒီကနေ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က လိုအပ်ရင် နောက်ထပ် သမ္မတ သက်တမ်း တာဝန် ထမ်းဆောင်မယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီကနေ့ တိုင်းရင်းသား
At 10/22/2012 10:43:00 AM No comments: